ဖမ်းဆီးခြင်းကို အသာတကြည်လက်ခံသော အပြစ်မဲ့သူအား သံသယရှိရုံဖြင့် အများသူငှာရှေ့မှာ လက်ထိပ်ခတ်ပြီး ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်သူ အထူးမူးယစ်မှ Ye Min Aung ကို ပြောပီ - သတင်းရွာ
ဖမ်းဆီးခြင်းကို အသာတကြည်လက်ခံသော အပြစ်မဲ့သူအား သံသယရှိရုံဖြင့် အများသူငှာရှေ့မှာ လက်ထိပ်ခတ်ပြီး ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်သူ အထူးမူးယစ်မှ Ye Min Aung ကို ပြောပီ
အပြစ်ကင်းစင်ပါလျက် သံသယရှိသူတစ်ဦးအနေနဲ့ ဖမ်းဆီးခံရခြင်းကို အသာတကြည်လက်ခံနေပါလျက် အများပြည်သူမြင်ကွင်းမှာ လက်ထိပ်ခတ်ပြီး ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်ရဲတဲ့ အထူးမူးယစ်က Ye Min Aung သို့
တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး အနေနဲ့ လိုက်နာစောင့်ထိန်းရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေကို ခင်ဗျား သင်ယူလေ့လာခဲ့ဖူးမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ လိုက်နာစောင့်ထိန်းရကောင်းမှန်းတော့ သိပုံမရဘူး
သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှု အားကောင်းမြန်ဆန်နေတဲ့ ခေတ်ကာလအတွင်း အများပြည်သူမြင်ကွင်းမှာတောင် ဒီလိုကျူးလွန်ရဲတာ ခင်ဗျားရဲ့ ပင်ကိုယ်ဗီဇကိုက ဆိုးသွမ်းတာကြောင့်လား?
အရင့်အရင် မှုခင်းတွေမှာလည်း ခင်ဗျားဒီလိုပဲ ကျူးလွန်နေကျပဲလား? လူသားတိုင်းမှာ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိပါတယ်။ ခင်ဗျားက အဲ့ဒီ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ကိုယ်ထိ လက်ရောက် ကျူးလွန်ခဲ့ရုံနဲ့ အားမရဘဲ Social Media မှာပါ ထပ်မံစော်ကားတယ်။ ပညာတတ်ဆိုတဲ့ အလွှာကိုပါ စော်ကားတယ်။
ခင်ဗျား စော်ကားခဲ့တဲ့သူက အတတ်ပညာအားဖြင့်လည်း B.E. (Civil) ဆိုတဲ့ဘွဲ့ကို ရရှိထားတဲ့သူ။ အသိပညာအားဖြင့်လည်း မိဘ၊ ဆရာသမား၊ ပတ်ဝန်းကျင် အပေါင်းအသင်း ဘယ်သူ့ကိုမှ ဒုက္ခမပေးတဲ့၊ သူ့အနုပညာနဲ့ လောကကို အလှဆင်နေတဲ့၊ အားလုံးက ချစ်ခင်ကြတဲ့ အနုပညာသမား။
ခင်ဗျားရဲ့ လုပ်ရပ်တွေက တပ်ဖွဲ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါ ကျဆင်းစေပါတယ်။ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု ဆိုတဲ့ စကားရပ်ကိုရော ခင်ဗျား ဘယ်လိုလက်ခံထားပါသလဲ? အားပါးတရ စော်ကားထားပြီး အကောင့်ပါ ဖျက်ပြေးတာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်ဟုတ်ပါသလား?
တပ်ဖွဲ့ကနေ ရဲပြေးအဖြစ် မပြေးလောက်သေးဘူးလို့တော့ ယူဆပါတယ်။ ယောက်ျားစစ်တယ် ဆိုရင်ပေါ့။ ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ပြင်ဆင်ထားပါ။တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ရော ဒီကိစ္စအတွက်ဘယ်လိုတာဝန်ယူမလဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်လိုပါတယ်။ ခရက်ဒစ်
အပွဈကငျးစငျပါလကျြ သံသယရှိသူတဈဦးအနနေဲ့ ဖမျးဆီးခံရခွငျးကို အသာတကွညျလကျခံနပေါလကျြ အမြားပွညျသူမွငျကှငျးမှာ လကျထိပျခတျပွီး ကိုယျထိလကျရောကျ ကြူးလှနျရဲတဲ့ အထူးမူးယဈက Ye Min Aung သို့
တပျဖှဲ့ဝငျတဈဦး အနနေဲ့ လိုကျနာစောငျ့ထိနျးရမယျ့ ကငျြ့ဝတျတှကေို ခငျဗြား သငျယူလလေ့ာခဲ့ဖူးမယျလို့ ယူဆပါတယျ။ လိုကျနာစောငျ့ထိနျးရကောငျးမှနျးတော့ သိပုံမရဘူး
သတငျးအခကျြအလကျစီးဆငျးမှု အားကောငျးမွနျဆနျနတေဲ့ ခတျေကာလအတှငျး အမြားပွညျသူမွငျကှငျးမှာတောငျ ဒီလိုကြူးလှနျရဲတာ ခငျဗြားရဲ့ ပငျကိုယျဗီဇကိုက ဆိုးသှမျးတာကွောငျ့လား?
အရငျ့အရငျ မှုခငျးတှမှောလညျး ခငျဗြားဒီလိုပဲ ကြူးလှနျနကေပြဲလား? လူသားတိုငျးမှာ လူ့ဂုဏျသိက်ခာ ရှိပါတယျ။ ခငျဗြားက အဲ့ဒီ့ဂုဏျသိက်ခာကို ကိုယျထိ လကျရောကျ ကြူးလှနျခဲ့ရုံနဲ့ အားမရဘဲ Social Media မှာပါ ထပျမံစျောကားတယျ။ ပညာတတျဆိုတဲ့ အလှာကိုပါ စျောကားတယျ။
ခငျဗြား စျောကားခဲ့တဲ့သူက အတတျပညာအားဖွငျ့လညျး B.E. (Civil) ဆိုတဲ့ဘှဲ့ကို ရရှိထားတဲ့သူ။ အသိပညာအားဖွငျ့လညျး မိဘ၊ ဆရာသမား၊ ပတျဝနျးကငျြ အပေါငျးအသငျး ဘယျသူ့ကိုမှ ဒုက်ခမပေးတဲ့၊ သူ့အနုပညာနဲ့ လောကကို အလှဆငျနတေဲ့၊ အားလုံးက ခဈြခငျကွတဲ့ အနုပညာသမား။
ခငျဗြားရဲ့ လုပျရပျတှကေ တပျဖှဲ့ရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာကိုပါ ကဆြငျးစပေါတယျ။ တာဝနျယူမှု တာဝနျခံမှု ဆိုတဲ့ စကားရပျကိုရော ခငျဗြား ဘယျလိုလကျခံထားပါသလဲ? အားပါးတရ စျောကားထားပွီး အကောငျ့ပါ ဖကျြပွေးတာ ယောကျြားတဈယောကျရဲ့ လုပျရပျဟုတျပါသလား?
တပျဖှဲ့ကနေ ရဲပွေးအဖွဈ မပွေးလောကျသေးဘူးလို့တော့ ယူဆပါတယျ။ ယောကျြားစဈတယျ ဆိုရငျပေါ့။ ရငျဆိုငျဖို့ အသငျ့ပွငျဆငျထားပါ။တပျဖှဲ့အနနေဲ့ရော ဒီကိစ်စအတှကျဘယျလိုတာဝနျယူမလဲဆိုတာ မေးခှနျးထုတျလိုပါတယျ။ ခရကျဒဈ
လက်ပံ တန်းအထကကျောင်း ၌ ကျောင်းသားများ အားဗိုလ်ချုပ်‌အောင်ဆန်း ဆံပင်ပုံစံထားရမည်ဟု ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ညွှန်ကြားဟု ဆို
ချစ်သူအသစ်ရရှိသွားပြီဖြစ်တယ့် အဆိုတော်တေးသံရှင် G-Fatt
အသက် (၇၂) အရွယ်ရှိအဘွားအိုတဦးအား ဝါးရင်းတုတ်ဖြင့် မသေမချင်း ရိုက်သတ်ခံရ
Running man ထဲက အရှည်ကြီး လီကွမ်ဆိုး ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်
စိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်ရပ်ဆိုးနဲ့ ပျံလွန်တော်မူခဲ့ရတဲ့ သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရဟန်းတစ်ပါး
အကယ်ဒမီရရ မရရ ဆက်ကြိုးစားပါမယ် လို့ပြောလာတဲ့ နေတိုး
ဖေဖော်ဝါရီ (၂၂) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ အသက် (၄၃)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အလှူ အဖြစ်
အလုပ်လေးနဲ့စားရတဲ့ပိုက်ဆံက ပိုအရသာရှိပါတယ်၊ ခိုင်းပါ လုပ်နိုင်ပါသေးတယ် ဆိုတဲ့ ဦးတိမ်ညွန့်(ရုပ်သံ)